Formal Education – Ministry of Education in Puntland
– Agaasiamha Waaxda Waxbarashada Tooska ah ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo kormeer ku tagtay Magalada Galkacayo.
5/Dec/ 2017- Agaasimaha waaxada Waxbarashada Tooska ah ee Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Murwo Maryan Jaamac Xuseen oo kormeertay xaaladda guud ee waxbarashada Gobolka Mudug Gaar ahaan Magalada Galkacayo, kormeerkaa oo ay ku tagtay qaar ka mid ah iskuulada Magaaladd Gaalkacyo. Sida Iskuulada kala ah Dugsiga sare ee faca wayn ee Cumar Samatar, iyo Dugsiga Hoose dhaxe ee Saalaamo iyo Dugsiga hoose dhaxe ee Barkhadle.
Agaasimaha oo weheliyaan Gudoomiyaha waxbarashada Degmada ee magalada Galkacayo Cali Cabdisahal iyo Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Mudug Axmed Huruuse Xaashi iyo kormeerayaasha Waxbaarshada Gobolka iyo dagmada Gaalkacyo, ayaa waxaa ay la hadleen qaar ka mid ah ardaydii Iskuuladaas, kuwaas oo fursad loo siiyey in ay su’aalo waydiiyaan Agaasimaha, waxaana ay waydiiyeen su’aalo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen, in wasaaraddu Qorsheyaal gaar ah u samaysay Magaaladda Gaalkacyo Waxbarashadeda.
Agaasimaha Waxaada Waxbarshada ayaa waxaa uu ardayda Dugsiyada sare kula dardaarmay, in ay ahmiyad siiyaan waxbarashada sare ee gudaha, maadaama haatan ay kor u kacday tayada waxbarashada sare ee Dalku, waxaase uu dhiiri galiyey in ay ardaydu dalka iyo Dibadda kii ay helayaanba ay kusii wattaan waxbarashadooda Dalka.
Agaasimaha Waxaada Waxbarashada Tooska ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Taclinta sre ayaa la kulmay qayb ka mid ah maamulayasha iskuulada Degmada Galkacayo isgaga iyo Gudooimiyaha Waxbarashada Degmada iyo Gobolka.
Ujeedada kormeerka Agaasimaha Waxaada Waxbarashada Tooska ah Maryan Jaamac Xuseen ayaa rabatay inay ogaato habsimi socodka xaladaha Waxbarshada degmada Galkacayo iyo inay soo ogaato baahiyaha khaaska ay u bahanyihiin Dugsiyada qaybtood.
Agaasimaha Waaxada Waxbarshada Tooska ah Marwo Maryan jaamac Xuseen ayaa kormeero kala duwan ku tagtay Gobolada Nugaal mudug iyo Sool,
mudadii Xafiiska Waxbarashada Tooska ah ay haysay.